Ɛbaa Bere Ano | Tete Wɔ Bi Ka
Ɛbaa Bere Ano
“YƐN WERƐ REMFI DA!” Eyi ne asɛm a nnipa a wɔhwɛɛ “Creation Drama” sini no pii kae. Ɛbaa bere ano, na wɔn a wɔhwɛe no werɛ amfi da. Nokwasɛm ne sɛ “Creation Drama” sini no bɛyɛɛ adansedi kɛse hyɛɛ Yehowa anuonyam. Bere a wofii ase yii saa sini no, ankyɛ na Hitler ne n’apamfo tuu wɔn ani sii Yehowa nkurɔfo so wɔ Europa, na wodii wɔn ani yayaayaw. Ná “Creation Drama” no yɛ sini bɛn?
“Creation Drama” no nyaa ne din fii Schöpfung (Creation) nhoma no mu
Afe 1914 mu no, Yehowa nkurɔfo adwumayɛbea ti a ɛwɔ Brooklyn, New York, U.S.A., no yii sini bi adi. Ná wɔato sini no din “Photo-Drama of Creation.” Ná sini no tenten yɛ nnɔnhwerew awotwe, na na wɔde kɔla ahorow ayɛ no fɛfɛɛfɛ. Afei nso na emu nnipa no kasa. Nnipa mpempem pii hwɛɛ “Photo-Drama” sini no wɔ wiase nyinaa. Wɔyɛɛ ne fã bi a ɛyɛ tiawa too din “Eureka Drama.” Woyii ɛno nso adi afe 1914. Efi 1920 rekɔ no, sini no ho nneɛma bi fii ase sɛee. Nanso na nnipa pii pɛ sɛ wɔhwɛ “Photo-Drama” sini no. Nnipa a wɔwɔ Ludwigsburg, Germany kae sɛ: “Da bɛn na mobɛsan ayi ‘Photo-Drama’ no akyerɛ yɛn?” Dɛn na na anuanom bɛyɛ wɔ ho?
Afe 1920 mfiase no, anuanom mpanyimfo a wɔwɔ Magdeburg Betel wɔ Germany no tɔɔ sini ho nneɛma bi fii Paris, France, na wonyaa bi nso fii Leipzig ne Dresden. Wɔde “Photo-Drama” sini no ho nneɛma bi a ɛnsɛee ne nneɛma foforo a wɔtɔe no yɛɛ sini foforo.
Ná onua bi wɔ hɔ a ɔto dwom paa. Na wɔfrɛ no Erich Frost, na ɔhyehyɛɛ nnwom bi a wɔde begyigye sini no ho. Woyii nsɛm bi fii Creation nhoma no mu a wɔde bɛkyerɛkyerɛ sini no mu. Ɛno nti na wɔfrɛɛ “Photo-Drama” sini foforo no “Creation Drama” no.
Ná sini foforo no ne “Photo-Drama” no nyinaa tenten yɛ pɛ; na ɛyɛ nnɔnhwerew awotwe. Enti na woyi no nkakrankakra kyerɛ ɔmanfo anwummere-anwummere. Nneɛma a na ɛwom no bi ne adebɔ nna ho nsɛm ne Bible ne wiase abakɔsɛm. Bio nso ɛmaa nkurɔfo hui sɛ atoro som adi adesamma huammɔ. Woyii “Creation Drama” no wɔ Austria, Germany, Luxemburg, Switzerland, ne mmeae ahorow a wɔka German kasa.
Erich Frost ne ne nnwom a ɔde gyigyee “Creation Drama” no ho
Erich Frost kae sɛ: “Bere a yɛreyi Drama no, sɛ edu baabi na yɛhome so kakra a, me ne m’ayɔnkofo a me ne wɔn to dwom no kyekyɛ yɛn nhoma ahorow ma wɔn a wɔwɔ hɔ nyinaa. Ɛda a yebeyi Drama no, yɛkyekyɛ nhoma pii sen bere a yɛreyɛ afie afie adwuma no.” Onua Johannes Rauthe na na ɔhwɛ ma woyi Drama no wɔ Poland ne ɔman a ɛnnɛ wɔfrɛ no Czech Republic no. Ɔkae sɛ wɔn a wɔhwɛɛ Drama no pii de wɔn address maa yɛn sɛ yɛmmɛsra wɔn. Yɛde wɔn address no kɔhwehwɛɛ wɔn ne wɔn bɔɔ Bible mu nkɔmmɔ.
Eduu 1930 no, bere biara a wobeyi “Creation Drama” no, ɔmanfo ba ma asa so hɔ bɔ ma be. Enti baabiara a wobɛfa biara Yehowa Adansefo ho asɛm na ɛda obiara ano. Eduu 1933 no, na Germany baa dwumadibea no ayi Drama no ama nnipa bɛyɛ ɔpepem biako ahwɛ. Käthe Krauss kae sɛ: “Bere biara a yɛbɛkɔ akɔhwɛ Drama no, na yetwa kilomita 10 (anaa kwansin 6) foro mmepɔw sian fa kwae mu. Yedii akɔneaba saa nna anum.” Else Billharz nso kae sɛ: “‘Creation Drama’ no na ɛmaa m’ani begyee nokware no ho.”
Alfred Almendinger kae sɛ bere a ne maame kɔhwɛɛ Drama no, “n’ani gyee ho araa ma ɔtɔɔ Bible, na ɔhwɛe sɛ obehu nea wɔfrɛ no ‘ahodwiragya’ wom anaa.” Wanhu wɔ Bible mu, enti ogyaee asɔre no, na akyiri yi osuaa nokware no bɔɔ asu. Erich Frost kae sɛ: “‘Creation Drama’ no twee dɔm baa nokware no mu.”—3 Yoh. 1-3.
Bere a na nkurɔfo aso “Creation Drama” no wɔ soro no, na Nasi nniso nso ama ne homene so wɔ Europa. Efi afe 1933 no, wɔbaraa Yehowa Adansefo dwumadi wɔ Germany. Efi saa bere no kosii sɛ Wiase Ko II baa awiei wɔ 1945 mu no, Yehowa asomfo a wɔwɔ Europa anya no ahogono koraa. Erich Frost dii bɛyɛ mfe awotwe wɔ afiase. Nanso otumi gyinaa mu, na akyiri yi ɔkɔyɛɛ adwuma wɔ Betel wɔ Wiesbaden, Germany. Ampa, “Creation Drama” no baa ne bere mu. Ɛhyɛɛ Kristofo pii mpamden ma wɔde akokoduru gyinaa sɔhwɛ a wohyiae wɔ Wiase Ko II no mu. Yɛn werɛ remfi Drama yi da!—Tete wɔ bi ka, Germany.
Mfe 100 ni a wɔyɛɛ “Photo-Drama of Creation” no. Ɛmaa nnipa nyaa gyidi sɛ Bible yɛ Onyankopɔn Asɛm.